amazon anotarisa ayo akanakisa eitema echishanu 2019 madhiri, kutengesa kutanga munaNovember 22
Kuru Nhau & Ongororo Amazon inotarisisa madhiri ayo akanakisa eChishanu Chishanu 2019, kutengesa kunotanga munaNovember 22
Amazon inotarisisa madhiri ayo akanakisa eChishanu Chishanu 2019, kutengesa kunotanga munaNovember 22
Amazon, mutengesi mukuru weUS, arikugadzirira imwe Nhema Chishanu inoshamisa, asi sezvo & # 39; s zvakaoma kuti uchengetedze zvibvumirano zvese zvinozoitika vhiki ino, Amazon yakafunga kuongorora zvimwe zvezvakanakisa nhasi.
Kutanga kubva, izvo & maapos; zvakakodzera kutaura kuti Amazon ichatanga madhiri eChishanu Chishanu munaNovember 22 uye mutengesi weUS achapa madhiri matsva zuva rese, zuva rega rega kubva mufashoni kusvika kumatoyi, kumba, zvemagetsi, zvishandiso zveAmazon uye nezvimwe.
Nekudaro, kutanga uno weChishanu, Mbudzi 22 kusvika Mbudzi 29 (Nhema Chishanu), vatengi vanogona kutenga zviuru zvezvishamiso zvinoshamisa pane ino gore & maapos; zvipo zvinonyanya kufarirwa, zvitsva uye zvinowoneka zvitsva, zororo zvakakosha, uye nezvimwe.
Amazon ichanyora ese madema eChishanu madhiri pane a yakatsaurirwa webhusaiti , asi iwe unogona zvakare kuvaona vachirarama kuburikidza neAmazon App pane chero Android kana iOS chishandiso. Kunze kwezviyero zvakajairwa, vatengi vanozogona zvakare kutora mukana wekusarudza imwe-yenguva-chete madhiri kubva kumusoro-tier mhando pane zvemagetsi, imba, fashoni, matoyi uye nezvimwe, zvese nemitengo yakaderera kwazvo. Aya madhiri anotarisirwa kuti atengese nekukurumidza, neitsva-yenguva-chete madhiri anotangisa zuva rese munaNovember 28 (Thanksgiving), Mbudzi 29 (Nhema Chishanu) uye Zvita 2 (Cyber ​​Muvhuro).
Pasina imwezve ado, heino Black Chishanu madhiri ekuratidzira kwakaratidzwa neAmazon pakutanga nhasi. Ramba uchifunga kuti izvi zvibvumirano, uye zvimwe zvakawanda, zvichave zviripo pamisi dzakasiyana uye nguva pakati paNovember 22 naNovember 29 (Nhema Chishanu), apo zvigadzirwa zvichiripo.
Echo Dot i $ 27.99 yabviswa - ingori $ 22.00 kana tora matatu-mapaki emadhora 64.97 chete
Yese-nyowani Echo Dot ine wachi iri $ 25 kubviswa - ingori $ 34.99
Echo Ratidza 5 is $ 40 kubviswa - ingori $ 49.99
Yese-nyowani Echo madhora makumi mana kubviswa - ingori $ 59.99
Echo Input is $ 20 yakabviswa - ingori $ 14.99
Tora iyo Echo Ratidza 5 uye Amazon Smart Plug chete $ 54.98
Tora sarudza Fire TV Edition Smart TVs uye wedzera Echo Dot pasina imwezve mutengo
Tora Moto TV Stick 4K ine Alexa Voice Remote uye Echo Dot ye $ 46,99 chete
Moto TV Inonamira ne Alexa Voice Remote iri $ 20 yakabviswa - ingori $ 19.99
Moto TV Inonamira 4K ine Alexa Voice Remote iri $ 25 kubviswa - ingori $ 24.99
Yese-nyowani Moto TV Cube ndeye $ 30 kubviswa - ingori $ 89.99
Tora Amazon Smart Plug ye $ 4.99 chete kana yatengwa neEcho Dot, Echo Dot nyowani neClock, Echo-itsva, Echo Plus, Echo Studio, Echo Show 5, Echo Show 8, uye Echo Show ( 2nd gen)
Yese-nyowani Echo Dot Vana Edition i $ 30 yakabviswa - ingori $ 39.99 KANA utore 3-pack ye $ 119.97 chete
Moto 7 Yevacheche Edition ndeye $ 40 yabviswa - ingori $ 59.99
Yese-nyowani Kindle Kids Edition iri $ 30 yabviswa - ingori $ 79.99
Moto 7 Hwendefa i $ 20 yakabviswa - ingori $ 29.99
Sevha pane Samsung Galaxy S10 uye Cherechedzo 10
Sevha kusvika ku45% pane ekushambadzira zvishandiso nezvimwe
Sevha pamahedhifoni kubva kuBose, Sony, uye mamwe marangi epamusoro
Sevha paGarmin smartwatches
Sevha makumi matatu muzana pasarudzo dzenhare
Sevha paJabra Elite Anoshanda 65t Earbuds
Sevha kusvika makumi matatu neshanu% pane yakasarudzwa iOttie Mota Kukwira Nhare Vanobata
Sevha paGarmin Forerunner 235 uye DriveSmart
Kwechinguva chidiki, vatengi veAmazon Music Unlimited vanogona kuwana zvakawanda - mwedzi mina yepayimusi yekushambadzira tier ye $ 1 chete. Zvakare, nekutenga kweasarudzo Echo zvishandiso, vatengi veAmazon Music Unlimited muUS, UK, Germany, uye Japan vanogashira mwedzi mina yeprimiyamu, isina-kushambadzira tier yemahara.
Chimwe chibvumirano chinonakidza chinopihwa neAmazon chine hukama neayo Prime Vhidhiyo sevhisi, iyo inobvumidza nhengo dzePrimary kubvarura kana kutenga mafirimu matsva ekuburitsa e50% mutengo unowanzoitika pakati paNovember 29 naZvita 5.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, vanyori vatsva vanozowana mwedzi mitatu ye Kindle Unlimited yemahara, nepo vatengi vese vachizokwanisa kusevha kusvika makumi masere muzana pasarudzo dzemhando dzeMhando dzekutengesa.
test strategy vs chirongwa chekuyedza
Iyi yakabhadharwa iOS uye Android mitambo yemahara kwenguva yakati rebei, vabate izvozvi!
Yakanakisa Apple iPad Air 4 makesi uye mabutiro
Motorola P4000 Yese Inotakurika Simba Rongedza maoko-on
Vatengi varipo veT-Mobile vari kuwana mumwezve mukana wekutora tambo yemahara (netambo)
Maitiro ekuyera munhu & apos; s kukwirira ne iPhone 12 Pro
Tarisa uone iyo Samsung Galaxy Buds 2
Waizviziva here: mamwe mafoni eSony Xperia akaviga mashandiro eFM ekutepfenyura